Russia mebiri Google nde 6,75 maka ngwa gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Russia na-akwụ Google ụgwọ nde 6,75 maka ngwa gam akporo
Ihe mkpofu na-abawanye ụba na-eme ka ngwaọrụ mkpanaka anyị rụọ ọrụ tupu ha emepee ya. Google nwa amaala na-etinye ọtụtụ ngwa metụtara ọrụ ya na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ ya. Ngwa ndị ejedebe na-emepụtagharị, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ dịka Samsung nwere nkwekọrịta na Dropbox ma ọ bụ WhatsApp wee hụ onwe anyị n'otu oge na Google Drive ma ọ bụ Hangouts, na-eburu ebe nchekwa na-enweghị isi, ọkachasị mgbe ọ bịara na ọrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji. Russia chọrọ itinye obere ọgwụgwọ na nke a, na-akwụ Google $ 6,75 ụgwọ maka ngwa ndị arụnyere na ngwaọrụ.
Google na gam akporo enweghi nsogbu na ntukwasi obi na Europe, ebe o kacha sie ike. FAS (Russian Federation Antimonopoly Service) amanyela nde mmadụ mma na ụmụ okorobịa sitere na Google n'ihi ngwa ndị a nke Google na-etinye na ngwaọrụ niile na-agba ọsọ gam akporo, ihe ọ bụla akara ma ọ bụ mkpa onye ọrụ, dịka mgbe ha manyere gị ịmepụta n'onwe gị akaụntụ Google Plus ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ọrụ Google n'ozuzu, dịka YouTube. Nke bụ eziokwu bụ na ndị a bụ ihe ndị Google na-agaghị ewere, n'ihi na ọ nweghị ndị ọrụ, mana ịchọrọ ịme ka ọrụ ya dị ukwuu na njiri ụgwọ ojii adịghị ka ọ bụ ezigbo ụkpụrụ.
Yandex bụ onye asọmpi dị mkpa nke Google na Russia, ụlọ ọrụ Google, nke nwere nyocha ọchụchọ kachasị ewu ewu na Russia ma n'otu oge ahụ na-arụpụta ngwaọrụ mkpanaka, onye asọmpi doro anya, nke gọọmentị Russia chọrọ irite uru, nke na football bụ a maara dị ka "a refirii n'ụlọ." Maka Google, mma a bụ obere mgbanwe, agbanyeghị, dị ka ngụkọ FAS si kwuo, ọ bụ 15% nke ihe Google nwetara na Russia na 2014. Ọfụfụ ọzọ na-emetụta Google naanị na Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Russia na-akwụ Google ụgwọ nde 6,75 maka ngwa gam akporo
Kporie ihe ruru ngwa 10.000 na egwuregwu sitere na vetiran soja AMIGA n'efu
7 usoro Netflix dị mkpa iji nwee ọ thisụ n'oge ọkọchị a